Rahoviana no mahasalama ny fihinanana divay?
Izay divay mandeha amin'ny sakafo inona?
Ahoana no hanandramanao araka ny tokony ho izy ny divay?
Ilaina ny dingana amin'ny asa maro amin'ny fanamboarana divay, manomboka amin'ny fijinjana ka hatramin'ny fahamatorana. Ireo antony samihafa toy ny fambolena, ny karazam-boaloboka, ny asa-tanana ary ny toetrandro dia mitana andraikitra lehibe amin'ny divay.
Miaraka amin'ny milina fanangonam-bokatra ankehitriny, ny voaloboka dia nesorina tamin'ny tahony nandritra ny fijinjana. Raha tsy izany dia esorina amin'ny taho ireo voaroy amin'ny fampiasana mpamono olona.
Ny fisotroana divay dia midika hoe fifaliana © Rawpixel.com
Torotoro izy ireo avy eo, ka mamorona ilay antsoina hoe mash. Ny voaloboka fotsy dia azo tsindriana avy hatrany amin'ilay tahony. Misy ihany koa ireo karazana mena izay esorina ao amin'ilay mash ireo fotony avy eo.
Ny mash dia tsy maintsy avela hijoro mba hahafahan'ny masomboly manangona. Io dia mamoaka akora izay mitaona ny tsiro sy ny lokon'ny divay avy eo. Ny fotoana maceration dia mety miovaova be, miankina amin'ny karazany sy ny vokatra irina. Raha potsehina mena avy hatrany ny mash mena, raha tsy mahazaka mijoretra am-pilaminana izy dia noforonina divay rosé na fararano fotsy. Toy ny fitsipika, ny mash mena dia avela hijoro mandritra ny andro maromaro. Ny fanamainana ny masash dia karazana fermentation hafa. Mandritra io fizotran-javatra io dia mivoaka avy amin'ny hoditra voaroy ireo maso mandoko manokana.
Aorian'ny fermentation dia apetaka amin'ny fametahana divay (presse divay) ny mash. Ny sisa tavela amin'ny voaloboka dia misaraka amin'ny ranom-boaloboka mamy. Zava-dehibe ny mitandrina tsara rehefa manindry mba tsy hanorotoro ny pips. Ny voa potipotika dia mamoaka ny zava-mangidy ao anaty divay ary mety hanimba ny zava-drehetra.
Raha ny divay fotsy no resahina, dia afaka amin'ny tsy fahampian-tsakafo alohan'ny fanamasinana azy ny must. Misy fomba telo samy hafa hanaovana an'io. Ny fampiasana sivana sediment, centrifugation na sedimentation. Na izany aza, ny fomba hafa hanatsarana ny divay azo ampiasaina ihany koa. Ohatra, azonao atao ny mampiasa bentonite hanafoanana ny rahona.
Aorian'ny sivana, afaka manomboka ny fanamasinana lehibe. Ny divay dia tahirizina anaty tanky na barika. Ny masirasira misy ao amin'ny must dia matetika tsy ampy amin'ny fermentation feno, ka izany no anampiana ny masirasira madio. Ny fermentation alikaola voalohany dia arahin'ny fermentation malolactic (fermentation malolactic). Ny bakteria asidra lakika dia manaparitaka ny asidra malika ho asidra laktika ary manova ny firafitry ny asidra ao anaty divay. Manaraka izany ny fitendry. Ny ravina vokarina mandritra ny fanamasinana dia misaraka amin'ny divay. Avy eo dia sulphurized sy mandoa onitra ny divay.
Ny famokarana ny divay dia maharitra fotoana lava. Fa ny olon-tiana divay rehetra dia hanamafy izany, mendrika ny ezaka.
Misy karazan-divay samihafa azo isafidianana. Ireo antony lehibe toy ny karazana voaloboka, faritra, tany, karazana fanodinana ary fitehirizana dia mandray anjara mavitrika amin'izany.
Ny divay fotsy dia vita tamin'ny voaloboka maivana. Toy ny fitsipika, divay fotsy dia mamo tanora. Manana voankazo sy hanitra vaovao izy ireo ary asidra be. Ny karazany malaza indrindra dia ny Sauvignon Blanc, Riesling, Pinot Blanc ary Chardonnay. Misy ihany koa ny divay tsy dia be asidra sy mankaleo loatra, nefa koa tsy dia vao manomboka. Saingy manana alikaola mahery kokoa izy ireo. Miaraka amin'ny divay fotsy dia misy ny maina maina, semi-maina ary mamy.
Ny voaloboka mena ihany no ampiasaina amin'ny divay mena. Ny lokon'ny divay dia tsy avy amin'ny pulpon'ny voaloboka, fa avy amin'ny hodiny. Noho io antony io, ny peel ary tsy maintsy mioty miaraka mba hamoahana taninina sy loko. Ny hamafin'ny loko dia miankina amin'ny fotoana ifandraisan'ny hoditra sy ny ilaina. Miaraka amin'ny divay mena mahery toy ny Bordeaux. ny fe-potoana dia mety hatramin'ny roa herinandro. Ny divay mena maivana toy ny Dornfelder na Beaujolais, etsy an-danin'izany, dia manana andro vitsivitsy monja. Ny divay mena matetika dia misy fanamarihana balsama sy episy. Miaraka amin'ny divay mena dia misy ihany koa ireo karazany maina, semi-maina ary mamy.
Tahaka ny divay mena, ny divay vita amin'ny raozy dia vita amin'ny voaloboka mainty. Amin'ny divay raozy, na izany aza, mifanohitra amin'ny divay mena, ny must sy ny hoditra dia misaraka afaka ora vitsivitsy. Ny ampahany kely amin'ny loko ihany no entin'ny tsy maintsy ary ny divay dia miloko maivana. Miavaka ny champagne miloko raozy. Ho an'ny divay raozy dia misy ny maina maina sy maina.
Ireo dia divay misy dioksidan'ny karbaona kely, ampiana artifisialy amin'ny ankamaroan'ny tranga ireo. Indraindray izy ireo dia antsoina hoe "antsasaky ny foza".
Ny divay mivaivay dia efa nisy hatrizay nisy tavoahangy fitaratra manokana mahazaka ny tsindry gazy karbonika. Ny divay mbola misy foana no ampiasaina ho fototry ny divay manjelanjelatra, na inona na inona divay mamoa, cava na champagne. Miaraka amin'ny divay mamirapiratra dia misy ireo maina maina sy maina.
Divay mamy malaza
Ny divay mamy mendrika dia vita tanteraka na amin'ny ampahany amin'ny voaloboka izay voadonan'ny lo. Mihena be ny voaloboka ary kely sisa ny ranony.
Divay voaro mafy
Ny divay Liqueur dia divay rehetra izay manana alikaola farafaharatsiny 15% amin'ny habetsany. Ny divay misy alikaola dia ampiasaina izay afafazana mba hahazoana alikaola mahery kokoa. Misy divay mahery miorina amin'ny voaloboka mihoapampana koa.
Izay karazana divay mety aminao no manapa-kevitra araka ny fanandramanao manokana.
Efa nisy ny angano efa ela fa mahasalama ny vera divay mena amin'ny hariva. Fa tena mahasalama tokoa ve ny divay?
Mahasoa ny fo sy ny fivezivezena?
Ny fihinanana divay tsy tapaka sy antonony dia manentana ny fikorianan'ny rà ary mampihena ny loza ateraky ny aretim-po sy ny aretim-po. Ny divay iray vera isan'andro koa dia misy fiatraikany tsara amin'ny fifangaroan'ny lipidan'ny ra ary manampy amin'ny famotehana ny kolesterola LDL manimba. Ho fanampin'izany, mihatsara ny fikorianan'ny rà sy ny toetran'ny fifangaroan'ny ra. Mihena ny risika trombosis. Ny alikaola ao anaty divay dia tompon'andraikitra amin'ny vokatra tsara amin'ny rafi-pitabatabana. Noho izany, ny divay fotsy dia mandeha tsara ary koa ny divay mena raha ny resaka fivelarana. Ny lehilahy antonony dia tsy tokony mihinana alikaola mihoatra ny 30 g sy ny vehivavy tsy mihoatra ny 20 g. Ny divay kely iray vera isan'andro dia ampy hahitana vokatra tsara. Ho an'ny vehivavy ny vola atolotra dia 0,15 l ary ho an'ny lehilahy 0,25 l.
Sakafo salama vita amin'ny voaloboka
Ny divay dia mahasalama tokoa noho ny akora voajanahary ao anaty voaloboka. Misy ihany koa ireo akora zavamaniry faharoa. Ny roa lehibe indrindra dia ny resveratol sy ny anthocyanin. Ireo dia heverina fa hahagaga. Anthocyanins dia afaka miaro amin'ny homamiadana, ny fahanterana aloha loatra ary ny Alzheimer. Resveratol dia iray amin'ireo scavenger radika mahomby indrindra. Ireo akora ireo dia hita ao amin'ny fotony, ny hoditra ary ny fototry ny voaloboka ary mifindra mankamin'ny divay mandritra ny fanamasinana, indrindra amin'ny divay mena. Mety misy zavatra maro hafa ao anaty divay izay misy fiatraikany tsara amin'ny fahasalamana.
Divay hahatsapa ho tsara
Ny divay be loatra dia mazava ho azy fa manimba
Miaraka amin'ny alikaola, ny tsipika misy eo amin'ny mahasoa sy ny manimba dia tena akaiky. Raha misy fiantraikany tsara amin'ny fahasalamana ny divay, dia manisa ny habetsany. Raha misotro mihoatra ny soso-kevitra ianao dia misy fatiantoka bebe kokoa amin'ny fisotroana alikaola betsaka noho ny tombony. Ary koa, raha misotro matetika mihoatra ny atoro anao ianao, dia mety hanjary handevozin'ny alikaola. Manoro hevitra antsika noho izany mba hisorohana ny alikaola mandritra ny roa ka hatramin'ny telo andro isan-kerinandro.
Ny divay iray vera isan'andro dia tsy mety manimba ny fahasalamanao. Ny divay mena manokana dia mety hisy fiatraikany tsara amin'ny fahasalamana. Saingy tokony hitandrina tsara ny vola laninao mba hahasalama azy io.
Raha mitadidy zavatra vitsivitsy ao an-tsainao ianao dia tsy mety diso. Mamorona firindrana eo amin'ny sakafo sy ny divay mba hisongadinan'ny fifaliana.
Divay sy trondro
Ny Riesling maivana miaraka amin'ny fofona citrus na Pinot Blanc dia mifanaraka tsara amin'ny trondro.
Divay sy hena
Saika ny zavatra rehetra dia avela amin'ny hena. Ny divay mena dia mandeha tsara kokoa amin'ny hena nendasina na hena mena, ny divay fotsy dia mandeha tsara kokoa amin'ny hena fotsy toy ny akoho amam-borona. Ny spicier ny hena dia, ny spicier sy matanjaka ny divay.
Divay sy gana, gisa ary lalao
Ny divay mena manitra toa an'i Zinfandel avy any California, Côtes du Rhone Villages avy any France na Australian Australian Shiraz dia mameno ny tsiron'ny gisa, gana ary lalao.
Divay sy fromazy
Ny fromazy malefaka dia mandeha tsara miaraka amin'ny divay kely. Ny fromazy matanjaka kosa dia mandeha amin'ny divay mahery. Ny divay maivana, ohatra, dia fijinjana tara mangidy sy mangidy na Kabinett voa iray. Ny divay mahery dia ohatra Eisweine sy Beerenauslese. Toy izany koa ny divay mena. Shiraz iray matanjaka sy feno vatana, ohatra, dia atolotra amin'ny fromazy mamy. Zava-dehibe ny manamarika fa ny divay mena dia ambany asidra. Ny divay fotsy maina dia manaloka ny tsiro fromazy. Ny divay mamy dia manatsara ny naoty matsiro sy masira.
Divay sy BBQ
Ho an'ny fandrahoana, ny divay dia mila firafitra hahafahana mahatanty ireo hanitra mahery namboarina. Chardonnay matanjaka sy maina avy any amin'ny barrique na Shiraz somary mangatsiaka dia mety. Ny divay amin'ny fahavaratra misy voankazo toy ny rosé dia asaina miaraka amin'ny legioma voatono.
Divay sy italianina kilasika
Ny divay mena italiana mahazatra toy ny Barbera, Sangiovese, Barolo na Chianti dia mandeha tsara indrindra amin'ny kilasika italiana toy ny pizza, lasagne ary spaghetti. Fa koa ny velvety, voankazo ho an'ny tannin ambany, divay mena marikivy malefaka tsara dia tsara amin'ny lovia italiana.
Divay sy wok
Ny Riesling iray amin'ny voankazo dia afaka manalefaka ny spiciness an'ny sakamalao sy sakay. Ny divay fotsy maivana misy nuansa hafakely toy ny voankazo, melon na manga, ohatra hoe Sauvignon Blanc maina, dia mifanaraka tsara amin'ny lovia aziatika tsy dia matsiro.
Divay sy sôkôla
Tsy tokony atambatra ny sôkôla mainty sy ny divay mamy. Tsara kokoa ny seranan-tsambo. Ity misy iray manana alikaola bebe kokoa ary mifanaraka tsara amin'ny sôkôla mahery. Tsy mety diso ianao amin'ny sôkôla misy seranana. Azonao atao koa ny mampiasa divay mena mahery misy asidra kely ho an'ny sôkôla mainty. Miaraka amin'ny atin'ny kakaô avo dia tsy tokony ho maina sy marokoroko ny divay, raha tsy izany dia hihamafy ny mangidy. Ny sôkôla mamy sy mamy dia mandeha tsara miaraka amin'ny divay fotsy izay mbola mamy.
Ny vera iray vera dia mety foana ary tsy tokony ho diso amin'ny sakafo matsiro na sakafo tsara.
Ny hany ilainao amin'ny fanandramana divay dia vera misy divay, corkscrew ary fifantohana.
Alohan'ny hanandrana ny divay
Tsy afaka mampiasa nify vao mibontsina amin'ny fanandramana divay ianao, satria ny feta-nify nokaoka ny tsiron'ny divay. Tsy tokony nifoka sigara na sigara ianao tato ho ato, satria ny nikôtinina vao homena dia mety hisy fiantraikany vetivety amin'ny tsirony. Tsy tokony hanana ny tsiron'ny kafe na sôkôla ao am-bavanao koa ianao, satria hamono ny ankamaroan'ny divay. Ny tsara indrindra dia ny maka rano kely na tapa-mofo tsy misy tsiro alohan'ny santionany.
Araraho ao anaty vera ny divay, ka ahodino. Raha mihidina amin'ny sisin'ny vera amin'ny divay matevina ny divay, dia tena manankarena izy. Arakaraka ny habetsaky ny rano mihosotra amin'ny rindrin'ny vera no manankarena ny fisotroana. Raha mihazona ny vera amin'ny vodiny na tongotra ianao dia voaro amin'ny hafanan'ny vatana ny divay. Tazomy eo anoloan'ny fotsy fotsy ilay vera feno divay ary jereo ny lokony. Ny divay fotsy dia mavo mavo maitso ka hatramin'ny volamena lalina. Ny divay mena mena mena ka hatramin'ny volomparasy lalina eo amin'ny sisiny. Ny lokon'ny mena-volontsôkôlà eo amin'ny sisiny dia manondro fitetezana mena efa masaka. Arakaraka ny maha-maivana ny divay mena no maha-antitra azy. Ny loko miloko dia nipetraka tamin'ny tany miaraka amin'ny fitehirizana mitohy. Ny divay izay tena maizina dia avy amin'ny faritra mafana be. Arakaraka ny maha-mainty ny divay fotsy no maha-antitra azy ireo.
Fanombanana ny fofona
Ny fofona aza mbola zava-dehibe kokoa noho ny loko. Fofony, ahodino mafy ilay vera ary fofohy fofona fohy izy nefa mahery. Manaova fanamarihana ny fofona hitanao. Maimbo matetika kokoa ary lava kokoa sao tsy manadino zavatra iray ianao. Omeo fotoana betsaka hanombanana ny fofona. Miaraka amina divay vitsivitsy, miandalana miandalana ihany ny fofona. Ny fanavahana dia atao eo amin'ny fianakaviana fito misy fofona (legioma, voninkazo, masiaka, voankazo, setroka, microbiolojika ary caramelized).
Fanombanana ny tsiro
Mitsoka ny divay aloha ianao dia mitazona izany ao am-bavanao. Avelao hosasana manodidina ny vava manontolo ny divay ary "mitsako" ny divay amin'ny lelanao. Manovoza rivotra ato am-bavanao feno divay, izany dia hanampy ny setroka hiakatra ao amin'ny nasofary. Azonao atao koa ny mandray ny tsiro haingana kokoa. Manaova fanamarihana momba ny zavatra tsapanao. Ny fahatsapana mamy sy marikivy dia laharana voalohany. Rehefa mandeha ny fotoana, mipoitra ny fofona manitra; natokana ho an'ny fianakaviana mitovy amin'ny fofona izy ireo. Nomena isa ihany koa ny fahatsapana ny divay ao am-bava, toy ny menaka, volon'ondry na koa mamy.
Rehefa vita ny fanandramana divay dia azonao atao ny mampiasa ny naotinao mba hahitana fahatsapana ankapobeny.
Pejy fandokoana divay marevaka | Mihinana zava-pisotro
Cocktails | mihinana sy misotro
Sakafo sy ronono vita amin'ny vokatra vita amin'ny ronono